Fahatakarana ny saram-pakan'ny mpisolovava UAE sy ny serivisy ara-dalàna. 0
Ny saram-panjakan'ny mpisolovava any UAE sy ny serivisy ara-dalàna
Ny mpisolovava dia tokony ho ny fifandraisana voalohany aminao amin'ny olana ara-dalàna anananao; fantatr'izy ireo ny votoatin'ny lalàna. Fa inona no atao hoe a saram-pitanana? Ary inona no tokony ho fantatrao momba ny serivisy ara-dalàna any Dubai, Abu Dhabi, sy Emirà hafa? Tonga eo amin'ny toerana mety ianao hahazoana valiny.
Amin'ny fotoana iray amin'ny raharaham-barotra na toe-javatra manokana, rehefa mandrahona ny hiantso ny mpisolovava azy ireo ny mpanjifanao na ny mpamatsy anao, dia mety hanana mpisolovava na mpisolovava "amin'ny fitazonana" ianao. Ny fananana mpisolovava amin'ny mpitazona dia midika fa mandoa vola amin'ny mpisolovava UAE matetika ny mpanjifanao. Ho setrin'izany, ny mpisolo vava dia manao serivisy ara-dalàna na torohevitra ara-dalàna isaky ny mila ny fanampian'izy ireo ianao. Izany no dikan'ny retainer na famaritana retainer.
Ny fananana Retainers dia ilaina indrindra amin'ny orinasa mila asa ara-dalàna tsy an-kijanona fa tsy manana vola ampy hanakaramana mpisolovava an'i Dubai mandritra ny fotoana feno.
Ilaina ny mahafantatra hoe rahoviana marina no tokony hifandraisanao amin'ny mpisolovava iray. Alohan'ny hanaovanao izany dia tokony ho azonao antoka fa manana tranga ianao. Na izany aza, hisy fotoana maro izay mety tsy azonao antoka, ary mety tsara ny manontany iray. Nefa tsy maintsy manana zavatra iray ao an-tsainao ianao; zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny mpisolovava anao sy ny fatokisanao azy. Na ny mpanjifa na ny mpisolovava dia samy mila miara-miasa amin'ny ekipa raha te-hahazo vokatra tsara.
Inona ny saram-pitaterana vola?
Azo antsoina mora kokoa ireo fandoavam-bola miverimberina izay atao amin'ny asan'ny mpisolovava. Izy io dia manome fahatokisan-tena amin'ny mpisolovava fa hahazo karama izy ireo amin'ny serivisin'izy ireo. Mandra-pahoviana ireo mpihazona? Retainers Contract dia maharitra herintaona.
Ny saram-pitaterana sy ny UAE
Ny UAE dia iray amin'ireo toerana lehibe iray izay orinasa tsara indrindra amin'ny lalàna misy. Ho hitanao ny orinasa mpanao lalàna tsara indrindra eran'izao tontolo izao manokatra birao iray na roa amin'ity faritra ity. Mazava ho azy avy eo, ho lafo ihany koa ny vidiny. Ny saram-pandraisana ny mpiambina dia zavatra henjana fa tsy maintsy ananan'ireo mpahay lalàna UAE. Na dia afaka mahita toerana maro izay mety tsy hangataka izany ianao, maro no miantoka fa aloany io sarany io alohan'ny tolotra omena azy ireo. Ny mpisolovava mpiara-miasa no miantoka ny be indrindra ary manaraka ny zokiolona. Na izany aza, tsy maintsy marihina fa na dia ireo izay mpanampy ny mpisolovava fotsiny aza dia mitaky farafahakeliny farafahakeliny.
Ny ankamaroan'ny orinasa dia miantoka ny mangarahara tanteraka, ary izany no antony tsy atahoran'ny mpanjifa manao izany fampiasam-bola izany. Nohazavaina mazava ny momba ny toerana halehan'ny vola sy ny fomba hampiasana azy. Raha misy vidiny fanampiny mivoaka amin'ny toe-javatra rehetra, dia ambara amin'ny mpanjifa ny mpanjifa ary omena amin'ny antsipiriany ny antony.
UAE dia manome safidy hisahana ny karamain'ny mpanjifa mety hitazona ny serivisin'ny mpisolovava iray. Ny anton-javatra tokony hodinihina momba ny saram-pananana amin'ny UAE dia ny tahan'ny ora sy ora isanisany, ny saram-pandraisana sy ny saram-pifanarahana ary ny sarany mifototra amin'ny karazana tranga. Ny fototry ny fandoavana ny saram-pananana dia ho an'ny tambin-karaman'ireto manaraka ireto:
Tfomba ampiasain'ny mpisolovava izy,
Ny fahasarotan'ny raharaha;
Ny sokajy lalàna misy ny raharaha; SY
zava-dehibe ny fahaiza-manao napetraky ny mpisolovava amin'ny alàlan'ny traikefa.
Ny tranga sarotra dia mety mila fiheverana bebe kokoa, ary hitombo ny fiampangana amin'ny toe-javatra toy izany.
Ataovy tsara izany: Mihaona amin'ilay mpisolovava anao.
Misy làlana marina sy fomba ratsy foana amin'ny fanaovana zavatra. Tokony hihaona amin'ny mpisolovava anao foana ianao alohan'ny hanapahanao hevitra raha tokony hitantana ny raharahanao izy na tsia. Tsy ilaina ny hoe samy mpinamana, fa ny mpanjifa sy ny mpisolovava kosa tsy maintsy mifanaraka. Ny fihaonana amin'ny mpisolovava anao dia hahafahanao sy ny mpisolovava hahafantatra ny iray ary ny iray hafa ary hamantatra raha toa ka azo atao ny miasa miaraka na tsia.
Ny famoahana lalàna dia mazàna lafo be, ary tsy tianao ny hahita ny tenanao amin'ny toe-javatra iray izay efa nandoavanao ny saram-pitanana sy mankahala ny mpisolovava anao na tsy matoky azy ampy handaminana ny raharahanao. Aza adino ny mandoa azy amin'ny ora omeny anao.
Mifampiresaka amin'ny Mpandraharaha
Raha misy milaza aminao fa tsy safidy ny fifampiraharahana amin'ireo fironana manana ny lazany, indrindra amin'ny toerana toy ny UAE dia angataho izy ireo hieritreritra indray. Azonao atao ny milaza azy ireo foana izay azonao atolotra sy mihaino izay lazain'izy ireo. Ho be dia be izay hanana mpanjifa ampy milahatra ary miteny hoe tsia ho an'izay manome denaria ambany noho ny tahan'ny takian'izy ireo. Saingy avy eo indray, misy ny mangoraka sy vonona ny hitombo. Mety hanaiky tolotra ambany kokoa izy ireo ary ho faly amin'izany.
Mitady mpisolovava tsara fisotroana olona any UAE
Manana orinasa lehibe maro i UAE izay sendra ny tsara indrindra manerantany. Ny orinasan-dalàna dia manome serivisy ara-dalàna amin'ny alàlan'ny mpisolovava izay isan-karazany amin'ny kolontsaina sy fiaviana. Izy ireo dia ampy fitaovana amin'ny fahalalana ny faritra maro. Tsy olana ny mahita mpisolovava tsara any UAE. Raha feno ny paosinao dia ho voakarakara tsara ianao. Hahita mpisolovava marobe avy amin'ny fiaviana samihafa koa ianao ary hahafantatra tsara ny fomba fitenenana amin'ny teny Arabo.
Mametraha fanontaniana be dia be ary manandrama milaza ny zava-misy amin'ny antsipiriany mba hahafantaran'ilay mpisolovava tsara ny zava-drehetra mialoha. Raha vantany vao nitohy ny raharaha, dia tsy raisin'ireo firehan-dalàna any Dubai any UAE ireo fahagagana.
Torohevitra ara-dalàna: misy ve izany any Dubai?
Ny orinasa tsara sasany ao UAE dia vonona ny hanitatra ny fahalalany amin'ireo izay vaovao amin'ny tontolon'ny lalàna ary mety tsy hanana vola eo am-pelatanany eo noho eo. Avelan'izy ireo hizara ny olana mahazo azy ireo ny mpanjifa ary hiresaka amin'ny antsipiriany ny zava-drehetra mba hahafantaran'izy ireo raha manana fitakiana izy ireo na tsia. Raha vantany vao vita izany dia afaka manoro hevitra azy ireo izy ireo mba hanakarama mpisolovava sahaza ary hitarika azy ireo momba ny vidiny izay hiaraka amin'izany rehetra izany.
Mangataka anao handefa aminay ny zavatra takianareo momba ny fifanarahana Retainer iray avy amin'i manindry eto na Mangataka fivoriana hiresahana bebe kokoa.
1 nieritreritra ny “Fahatakarana ny fototry ny saram-panjakan'ny mpisolovava UAE sy ny serivisy ara-dalàna.”
Febroary 6, 2018 amin'ny 10: 37 am
Manana fifandirana amin'ny mpamorona aho izay tokony handoa VAT. Ity manaraka ity dia andiany fohy momba ny tranga:
Nametraka drafi-panamboarana efitrano fandraisam-bahiny amin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny trano fandraisam-bahiny aho tamin'ny Jolay 2014.
Nisy taratasy famandrihana nosoniavin'ny andaniny roa.
Ny endrika dia namaritra ny vidiny, ny fandaharam-potoana fandoavana ary ny antsipiriany momba ny unit.
Nangina tao amin'ny VAT ilay endrika.
Nanomboka nandoa vola araka ny fandaharam-potoana aho.
Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy fisoratana anarana vita amin'ny DLD, satria tsy nisy SPA nosoniavina.
Nahazo mari-drafitra SPA aho tamin'ny 21 janoary 2018. Misy fepetra sy fepetra apetraka ary mifampidinihana.
Ny antontan-taratasy tokana nifanarahana hatrizay dia ny Forma Reservation sonia izay mbola mangina ao amin'ny VAT. Fantatro fa ny mpandrindra dia tokony nifampiraharaha tamiko talohan'ny 01 Janoary 2018 momba ny vidiny voalaza ao, fa tsy nahavita izany ary ny vidin'ny Reservation Form dia mitohy, arak'izany.
Ny mpamolavola dia tsy mikasa ny hampihatra ny Fitsipika Transitional napetraka ao amin'ny lalàna VAT ary manindry fa ny VAT dia tompon'antoka amin'ny mpividy.
Faharoa, mangataka amiko ny mpamorona mba hamerina aminy ny saram-pisoratana anarana amin'ny DLD, avy hatrany, raha tsy izany dia hisy sazy ary tompon'andraikitra amin'ny fandoavana ny sazy aho. Izy io dia manondro fampandrenesana DLD momba ny fe-potoana farany fisoratana anarana tamin'ny 25 Jona 2015 tamin'ny teny Arabo (kopia mifatotra). Fantatro fa ny datin'ny SPA vita sonia dia horaisina ho datin'ny fividianana ny fanisana ny andro tara amin'ny fanaovana fangatahana fisoratana anarana amin'ny DLD.
(Dikao ao amin'ny pejy 2 amin'ny 2)